Kenya oo ka hadashay Go’aankii Maxkamadda ICJ ee dacwadda badda | Allbalcad Online
Home CAALAMKA Kenya oo ka hadashay Go’aankii Maxkamadda ICJ ee dacwadda badda
Kenya oo ka hadashay Go’aankii Maxkamadda ICJ ee dacwadda badda
Dowladda Kenya ayaa maalmo kadib waxaa ay ka hadashay sida ay u aragto go’ankii Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ ee ahaa in marnaba aysan aqbaleyn in dib loo dhigo markii Afaraad Dacwadda Badda ee kala dhaxeeysa Soomaaliya.
Go’aanka Maxkamadda ayaa yimid kadib markii Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dhageysiga kiiska oo loo balansan yahay 15-ka Bisha Maarso ee sanadkna 2021.
Xoghayaha joogtadda ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya Macharia Kamau, ayaa sheegay in Dowladda Kenya diyaar u tahay inay xaadirto dhageysiga kiiska dacwadda badda ee kala dhaxeysa Soomaaliya.
Macharia Kamau oo Warbaahinta la hadlay waxaa uu sheegay in go’aanka diidmada ah ee maxkamadda in aysan ka dhigneyn inay Kenya guuldareysatay, balse uu rajeynayo in tallabo horay loo qaado.
Sidoo kale waxaa uu sheegay isaga oo ka hadlayay arrimaha la xiriira sida uu u dhacayo dhageysiga kiiska dacwadda ayuu sheegay in la eego xaaladaja Cudurka Coronavirus ee halista ah, in kastoo Maxkamaddu sheegtay in sitoos ah ay wafdiyo u soo kala dirsanayaan labada dhinac.
Maxkamadda Caalamiga ah ee ICJ ayaa waxaa la filayaa inay go’aan rasmi ah ka gaarto kiiska dacwadda Badda, waxana dowladda Soomaaliya ay sheegta inay rajo wyen ka qabto in ay dacwadda uga guuleystan Kenya.
Previous articleMusharax Daahir Geelle oo ka digay in dowladda hor-istaagto Banaanbaxa Jimcaha
Next articleMidowga Musharixiinta oo kulan la yeelanaya Wakiilada Beesha Caalamka
Madaxa xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey Michelle Bachelet ayaa ugu baaqday dowlad Ethiopia inay u oggolaato kormeerayaal ka socda Qaramada Midoobay inay galaan gobolka...
Dowlada Federalka oo shaacisay in Ra’iisul Wasaare Roble uu caawa la...